कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएपछि स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात
दाङ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा कार्यरत एकजना स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात भएको छ। कोरोना संक्रमितको मृत्यु चिकित्सकको लापरबाहीले भएको भन्दै शुक्रबार बिहान भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा कार्यरत एकजना स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात भएको हो।
भेरी अस्पतालको इमरजेन्सी विभागमा कार्यरत हेल्थ अशिष्टेन्ट भुपेन्द्र शाहीमाथि हातपात भएको घटनाको अस्पताल प्रशासनले निन्दा गर्दै दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको छ। अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रमोद धिताल र अस्पतालका सदस्य सचिव डा. प्रकाश थापाले हल्थ अशिष्टेन्ट शाहीमाथि भएको हातपातको निन्दा गर्दै दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्। अस्पताल प्रशासनले घटनाको निष्पक्ष छानविन गरि दोषी उपर कडा कानूनी कारबाहीको माग गरेको समेत गरेको छ।
शुक्रबार बिहान साढे ८ बजेतिर अपरिचित ३/४ जनाको समूहमा आएका व्यक्तिहरुले कोभिड वार्डमा आफन्तको मृत्यु भएपछि बिरामीलाई किन समयमै हेर्न नआएको भन्दै हातपात गरेका थिए।कोरोना संक्रमित बिरामीको मृत्यु भएपछि चिकित्सकको लापरबाहीले गर्दा भएको भन्ने आरोप लगाउँदै श्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात हुनुले असुरक्षा महसुश भएको भन्दै अस्पताल प्रशासलने भरपर्दौ सुरक्षा ब्यबस्थाको माग पनि गरेको छ।
धिताल र थापाले कोभिड–१९ को महामारीबाट बिरामीलाई बचाउन रातदिन सेवा गरिरहेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई उच्च मनोवल बनाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा त्यसबिपरीतका गतिबिधि हुनु दुःखद भएको उल्लेख गरेका छन्।
नेपालमा थप २ हजार ६ सय ७ जना संक्रमित थपिए : निको हुने कति ?
झलनाथ खनाललाई उपचारका लागि दिल्ली लैजाने तयारी
कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका एकको मृत्यु